မန္တလေးမှာ ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်မယ့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန် ကိုတော့ အတိအကျပြောပြထားတာ မရှိပါဘူး။
စိုင်းစိုင်းက မန္တလေးပရိသတ်တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ Sai Sai Show ပွဲကို မန္တလေးမှာ လုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ မန္တလေးမှာ ဖျော်ဖြေပွဲ မလုပ်ခဲ့တာလည်း ၂ နှစ်ကြာပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က မန္တလေးမှာ ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်အားပေးကြမယ့် ပရိသတ် ဦးရေနဲ့ ပွဲကျင်းပမယ့် နေရာကို ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’Mandalay မှာပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် တက်ရောက်မယ့်လူဦးရေသိချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် လုပ်သင့် မသင့်နဲ့ ဘယ်ကွင်းမှာလုပ်ရမလဲ ရွေးချယ်ချင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် SAISAI SHOW ကို လာမယ့်သူတွေက Share ပေးပါ လာနိုင်မယ့် Potential Fans တွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Mention ခေါ်ပေးပါ’’ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ၁၁ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေးမှာ Sai Sai Show မလုပ်ဖြစ်တာ ၂ နှစ်ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ Sai Sai Show ကိုတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က မန္တလေးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
‘’ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဧပြီလက မန္တလာသီရိ Stadium မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီပွဲတုန်းက ပရိသတ် ၁၅၀၀၀ ခန့်တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပြီးတော့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး မန္တလေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး SAISAI ရဲ့ Mandalay Show ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က Swan Hotel မှာ ပရိသတ် ၃၀၀ နဲ့ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၆ နဲ့ ၂၀၀၈ မှာ City Hall ၊ ၂၀၁၂ နဲ့ ၂၀၁၄ မှာ Modalay Hill Resort ( အခု Mecure ) နဲ့
နောက်ဆုံး ၂၀၁၇ မန္တလာသီရိကွင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ အခု ၂ နှစ် ရှိသွားပြီ။ ဒီတော့
What you say, Mandalay? Are you ready for SAISAI SHOW ??’’ ဆိုပြီးတော့လည်း ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အခုလုပ်မယ့် Sai Sai Show ပွဲကိုတော့ ဘယ်နေ့၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ လုပ်မယ် ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။